विश्वकपः वार्नर बने सर्बाधिक रनकर्ता, इंग्ल्याण्डविरुद्ध पनि अर्धशतक – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकपः वार्नर बने सर्बाधिक रनकर्ता, इंग्ल्याण्डविरुद्ध पनि अर्धशतक
काठमाडौं, असार १० । १२ औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत इंग्ल्याण्डविरुद्धको खेलमा अष्ट्रेलियाले पहिलो विकेट गुमाएको छ । उसले २४.४ ओभरमा ओपनर डेभिड वार्नरलाई ५३ रनमा गुमाएको हो । उनलाई मोइन अलिले क्याच आउट गराए ।
कप्तान फिन्चको चौथो अर्धशतक
अष्ट्रेलियाका कप्तान आरोन फिन्चले इंग्ल्याण्डविरुद्ध पनि अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ९ चौकाको मद्दतमा ६१ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा फिन्चको यो तेस्रो अर्धशतक हो । साथै उनले यो संस्करणमा शतकसमेत बनाइसकेका छन् । फिन्चले श्रीलंकाविरुद्ध १५३ रन बनाएका थिए ।
इंग्ल्याण्डको पूरा टिमः इयोन मोर्गन (कप्तान), जोनि बेरिस्टो, जोस बटलर, मोइन अली, जो रुट, बेन स्टोक्स, क्रिस ओक्स, आदिल रशिद, मार्क उड, जोफ्रा आर्चर र जेम्स भिन्स
ट्याग्स: australia vs england, david warner
बागलुङकी युवतीको दोस्रो परीक्षण रिपोर्ट पनि ‘पोजेटिभ’
चलचित्र प्राविधिकहरूलाई पल शाहले दिए ५ लाख
को हुन् नेपालमा कोरोना देखिएका सातौं संक्रमित?
अचम्मको संसारः कोभिड र कोरोना बने भाई-बहिनी
कोरोना सारेको भन्दै प्रेमिकाको नै हत्या गरेपछि…
कोरोनाबाट सोमालियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको निधन
लकडाउनमा बाहिर निस्कनुभएको छ ? होसियार, ड्रोनबाट अनुगमन गर्दै प्रहरी (भिडियो)